How to debug Arduino? | Easydevboards
Home / Arduino / Basic Arduino / How to debug Arduino?
Arduino ကို အသုံးပြုပြီး Programming Project ၁ ခု ရေးသားတော့မည်ဆိုလျှင် အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ပြဿနာများကို မည်သို့ ဖြေရှင်းရမည်ကို သိရှိဖို့လိုပါသည်။ တွေ့ရသည့် Error (အများများ)၊ Problem (ပြဿနာများ) ဖြေရှင်းရန်အတွက် အနည်းဆုံး Debugging လုပ်တတ်ဖို့လိုပါသည်။
Arduino Project ၁ ခု စတင်ပြီဆိုလျှင် Arduino IDE တွင် မိမိအသုံးပြုမည့် Board အမည်၊ COM Port ကို မှန်ကန်အောင် ရွေးချယ် ရမည်ကို သိရှိပြီး ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် Arduino IDE တွင် Error ကို မည်သို့ ကြည့်ရှုရမည်ကို လည်း သိရှိရန်လိုသေးသည်။
Error များကို Arduino IDE ၏ အောက်တွင် အနီရောင် စာလုံးများဖြင့် တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ Error မှာ Programer is not responding ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Computer နှင့် Arduino Board ကြား ချိတ်ဆက်မှု တခုခုဖြစ်နေပြီးဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် ပြဿနာမှာ Arduino Board လုံးဝ အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်းနှင့် မိမိ ရွေးထားသော Port မှားယွင်းမှုဖြစ်နိုင်သည်။
ပထမဆုံး အနေနှင့် Port မှန်ကန်အောင်လုပ်ပြီး စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်သည်။ Port မှန်ကန်ပါက Done Uploading စာသားကို တွေ့ရပေမည်။
မိမိ Programming ရေးသားချိန်တွင် Syntax Error များကို လည်း မကြာမကြာ တွေ့ကြုံရမည်။ အောက်ပါ Error သည် “;” ထည့်ရန် မေ့ကျန်ခဲ့သော Error ဖြစ်သည်။
Arduino IDE ၏ အကြံပြုချက်မှာ “expected ‘;’ before ‘}’ token”. ဟု ပြပြီး ဖြစ်နိုင်သော နေရာကို အနီရောက် Bar နေရာကို တွေ့ရမည်။ ထိုနေရာ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ကြည့်ရှုပါက delay(1000) နောက်တွင် “;” မေ့ကျန်ခဲ့သည်ကို သိရှိရမည်။
Programming ရေးရင်း အမှားပေါင်းများစွာ ကြုံရမည်သာဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်သည့်နေရာတွင် မှားသည် ဘာကြောင့် မှားသည်ကို Arduino IDE က အကြံပြုနိုင်သောကြောင့် ကြောက်စရာတော့ မဟုတ်ပါ။
တခါတရံ မည်သည့် အမှားမှန်း မသိပါက Arduino IDE မှ ဖော်ပြသော Error များကို ကူးယူပြီး Google တွင် ရှာဖွေပါက အကြံပြုချက်ပေါင်းများစွာကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။